မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): မြန်မာပြည်ဂိုဏ်းတွေအကြောင်း ဖတ်စေချင်တယ်
ဒီမှာ Download ယူပါ - http://www.mediafire.com/မြန်မာပြည်မှ ဂိုဏ်းများ
ဒေါင်းလို့လည်း မရဘူးကွယ် ဘာကြောင့်လဲ ကိုယ်ကလည်းခပ်တုံးတုံးရယ်
email လေးများရရင် sent ပေးကြပါအုံးနော် MinnGrace@gmail.com
မေးထဲကနေ ပို့ လိုက်ပါပြီနော..
လိမ်မာနေတယ်ပေါ့ တွေ့ဦးမယ် ဟင်းဟင်း
noenoelay2008@gmail.com ko send pay par naw
Htet Paing said...
htt.paing@gmail.com ကိုပို့ပေးပါဗျာ.ဒေါင်းတာ လူပဲဒေါင်းသွားလို့ပါ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဒေါင်းလို့လဲရဘူး ကျေးဇူးပြုပီးပို့ပေးပါနော် myanmarphyithar270@gmail.com
mg swan said...
please send at kawnsanli785@gmail.com
ဒေါင်းလို့မရဘူး အီမေးက thurathwe@gmail.com
ဘာဂိုဏ်းတွေလည်း ကိုယ့်ဆရာ...ဥုံဖွဂိုဏ်းလား ခြုံမဂိုဏ်းလား...အထက်က ကွန်မန့်တွေကတော့ ဒေါင်းလို့မရဘူးချည်း အော်ထားတာပဲ...း)
အဝေးက အိမ် said...
ဒေါင်းလို့မရဘူး မောင် ရေ့
hello godfather said...
hellogodfather@gmail.com ကိုပို့ပေးပါဗျာ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ko nyi said...
ကျနော်တို့ ကနဂိုကကိုမတတ်လို့ ပါဆိုမှ
ကျနော့ email ကိုဘဲပို့ ပေးပါ
Mg, Please sent me.
Pawlaw Kyaw said...